Izixhobo zeWebra Scraping - I-Semalt Advice
I-Scraper (ukongezwa kwe-Google Chrome)
Abahlukeneyo abangaqulunqiyo kunye nabaxhasi be-freelancers bakhetha u-Scraper ngenxa yezinto ezingafaniyo zokukhangela idatha. Le sixhobo yesayensi yolwazi oluqhutywe kwi-GUI lunokukhangela amabini asephambili kunye neewebhu eziphambili kwaye ube nobugcisa obuninzi bokufunda ukwenza umsebenzi wakho ube lula. Eli qonga lenzelwe ukukhipha idatha esuka kuma-Amazon, eBay, nakwezinye izingosi ezifanayo kunye ne-built-in ye-spam . Ngaloo nto, unokufumana lula ugaxekile kwidata yakho kwaye unokuyifumana kwisithuba seminithi okanye ezimbini. Unayo ilayibrari yabaxhasi be-Google API yokufumana idatha yolwazi olungcono kwaye igcina ulwazi lwakho kwisiseko sayo sedatha. Ungalondoloza kwakhona idatha kwi-hard drive yakho okanye nayiphi na ifowuni ozikhethelayo.
Ingeniso. Io, akudingeki ukuba ube yingqondo yobuchwepheshe kwaye unokukhangela idatha ephakamileyo yexesha eliqhelekileyo. Isicelo sefayili yebhanki sitshilo ukuba siye savala intswelo yabangenayo iprogram kunye noswazi lwenzululwazi. Njengoko siyazi ukuba i-data yesayensi idinga amanqaku kunye neemathematika, izakhono zenkqubo, kodwa akudingeki ufunde nantoni na ukuba usebenzisa ingenisa. io. Esi sixhobo sifaneleka bobabini kunye namashishini.
I-Kimono Labs yi-software evulekileyo ye-web scraping software. Inokukhangela idatha ukusuka kwinani elikhulu leendawo zingakapheli imizuzu. Iza kuzo zombini iinguqulelo zamahhala kunye ezihlawulelwayo kwaye zifanelekile kubantu abangaqhelekanga. Nge-Kimono Labs, akudingeki ukuba ufunde iPython okanye nayiphi na ulwimi lolwimi. Abaqhibi bayo abancinci bakunceda ulandele idatha yakho okanye iphepha lewebhu ezahlukeneyo. Umele ulande kwaye uqalise le nkqubo kwaye vumela i-Kimono Labs ukuba ilandele idatha kuwe kwimizuzu embalwa. Ukuphefumula okusekelwe kumafu kukuvumela ukuba wabelane ngolwazi phakathi kwezixhobo ezahlukeneyo ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza. I-Kimono Labs isetyenziswe ngamashishini, intatheli, abathengisi be-intanethi, ii-arhente, kunye nama-freelancers kwisikhulu esikhulu.
I-Facebook kunye ne-Twitter API
Idatha ebalulekileyo yingxaki enkulu kubaninzi bewebhu kunye nabangabasebenzi. Ngako oko, bahlala basebenzisa i-Twitter ne-Facebook API ukuze bafumane idatha yabo. I-APIs isinceda ukuba siphume ulwazi oluchanekileyo kwiiwebhusayithi kunye neeblogs, kwaye yenza izibikezelo malunga nendlela yokuhlela nokugcina idatha emva kokuba ikhutshwe ngokupheleleyo. Inxalenye engcono kukuba ii-API zinokubambisa i-web content ngokulula, kwifomati efundekayo kwaye engahlaziywa. Banikezela ngokubonakalayo kakuhle kwedata echanekileyo, bahlule kwiindidi ezahlukileyo, okanye bangenise kwiifom ezahlukeneyo ngokwemiqweno yethu kunye neemfuno. Kumele usebenzise ama-API eendaba yoluntu ukuba ungumuntu ongeyomsebenzi ongekho buchule bokwenza iinkqubo Source .